किसानलाई आत्महत्याबाट जोगाएका भारतका पूर्व अर्थमन्त्री चिदम्बरम, भष्ट्राचारमा कसरी तानिए?
घाटामा गएका किसानहरुले आत्महत्या गर्ने दर बढ्दै गएको थियो। त्यसअघिको एक दशकमा १ लाख ५० हजार कृषिक्षेत्रमा तत्कालिन समयको चरम दुरावस्थाबाट पीडित भएर ज्यान फालिसकेका थिए। घोषणा गरे अनुसार २ हेक्टर जमीन भएका किसानहरुले सरकारी बैंकहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा हुन्थ्यो। यस अन्तर्गत ब्यक्ति वा साहुसँग लिएको ऋण भने पर्दैनथ्यो। दत्तुले बैंक नभई साहुसँग ऋण लिएका थिए त्यसैले हतासमा ज्यान फालेका थिए।
किसानलाई आत्महत्याबाट जोगाएका भारतका पूर्व अर्थमन्त्री चिदम्बरम, भष्ट्राचारमा कसरी तानिए? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।